Cabsi Cabsi leh: Khiyaanada Aqoonsiga iyo Internetka | Martech Zone
Scared Stiff: Khiyaanada Aqoonsiga iyo Internetka
Khamiis, Maarso 1, 2007 Jimce, Maarso 9, 2007 Douglas Karr
John Stossel oo ka tirsan ABC 20/20 wuxuu lahaa a show fantastik ah usbuucii hore, Cabsi Cabsi leh: Ka walwal Ameerika. Wuxuu bixiyay xog adag oo kahadlaysa saameynta warbaahintu ku leedahay nolosheena iyo sida ay u saameyso shacabka iyo cabsidiisa.
(Isaguba wuu lahaa Stephen Dubner oo ka socda Freakonomics bandhigga, sidaas darteed waa inaan daawadaa!)
Dhibaatada uu gartay ayaa ah in waxyaalaha aan ka walwalsanahay badankood aysan dhab ahaan qatar ahayn. Hal tusaale oo layaableh ayaa ah isbarbardhigga haysashada qori rar ah ama barkadda dabaasha… barkadaha dabaasha waxay dilaan carruur aad uga tiro badan qoryaha la rarto. Sababo jira awgood, kama baqeyno inaan carruurteenna u dirno guri barkad leh we laakiin marna kuma aadi doonno guri qori sita.
Toddobaadkan, cabsidii ayaa igu dhacday aniga oo guriga ila jooga. Waan iska dhaafi doonaa faahfaahinta gory, laakiin waxaan ku soo biiray barta xiriirka bulshada ee leh aalado aad u fiican oo lagu dhisi karo xiriirka qoyskaaga iyo in 'shabakaddaada' ay iska baxaan oo ay iskood u koraan. Khiyaanada goobta waxay ahayd inaad gasho dhamaan qoyskaaga iyo xiriirkooda adiga… arjiga ayaa sameeya inta kale… oo laxiriirto midkastoo kamid ah si ay uqortaan una sii wadaan dhismaha qoyska. Waa codsi cabsi leh oo leh dhammaan astaamaha saxda ah component qayb fayras ah, qalab, xog-ururin xiriir, dhammaantoodna ku jira hal xirmo oo yar yar oo ah '2.0 XNUMX'.
Waatan qashinka… waxaad gashaa macluumaadka qoyskaaga. Waxaan u dhaqaaqay si doqonnimo ah oo carrab la 'oo ah inaan kooxda oo dhan ka laaday oo aan xogta qoyskeyga halkaas ku dhajiyay. Codsiga ayaa markaa la xiriiray xubin kasta oo ka tirsan qoyskeyga. Dhallinyaradu waxay qabsadeen isla markaana bilaabeen inay dhisaan shabakadooda. Waxay ahayd sheeko ka duwan kuwii hore. Waxaad u malayn lahayd inaan baasaboorrada iyo kaararka deynta ee qoyskayga ku dhajiyo internetka si aan u qaato! Waxay gabi ahaanba ka argagaxeen inaan sameeyo waxaas oo kale. Naxdin!
Xatooyo Aqoonsi, Xatooyo Aqoonsi !!! Caqligeyga, caqligayga, iyo - inta badan aaminaadayda - isla markiiba su'aal baa la galiyay. E-maylka ololaya waxay daba socdeen emayl ololaya… oo i baraya halistaan ​​cajiibka ah iyo sida taxaddar la'aanta ah ee aan u geliyay qoyskeyga qatarta. In kasta oo aanan ka walwalsanayn Xatooyada Aqoonsiga, waxaan si dhakhso leh ugu raad raacay shirkadda si aan u helo xogta su'aasha ka taagan… iyo wixii xog ah ee la xidhiidha immediately isla markiiba loo qaado. Taasi ma aysan joojin canaanta. Waa inaan kuu sheegaa… 38 jir oo toban sano iga dambeeya dhinaca Warshadaha, waxaad u malayn lahayd inaan ahaa wixii ugu xumaa ee ku dhaca shabaq ilaa SPAM.
Dhibaato ayaan kala kulmi doonaa qoraalkan sidoo kale… kama dhamaanayso waqti dhow. Haddii kiiska la xukumo oo uu ku dhammaado karbaash dadweyne, weli ima badbaadin doono. Waxaan u maleynayaa inaan ka maqanahay dhammaan dardaaranka.
John Stossel waa sax. Arrintan cabsi-gelinta ah ee ganacsiga iyo warbaahinta ayaa gebi ahaanba faraha ka baxday. Xaqiiqdu waxay tahay in ganacsi xatooyada aqoonsiga ayaa is weydaarsan doonta lacag aan xad laheyn oo ka badan xatooyada aqoonsiga dhabta ah. Laakiin waxay heshay dareenka deyn bixiyeyaasha, dowladda, iyo warbaahinta sidaa darteed waxay ku jiri doontaa iftiinka in muddo ah. Dhammaan xogtayada ayaa lagu muujiyay tan xun Internet-ka oo dhawaan ayaan dhammaanteen la wareegi doonnaa. Ma jiraan wax joojin kara. Waan dhamaynay. Adduunku wuu dhammaanayaa.
Sida laga soo xigtay tirakoobka, 69.4% dhammaan qoysaska Mareykanka ayaa hadda isticmaalaya internetka. Waxaa yaab leh 210,000,000 oo Mareykan ah hadda internetka. Iyo sidoo kale macluumaadkooda kaararka deynta, taariikhdooda amaahda, khariidadaha xaafadooda, macluumaadkooda amniga bulshada, faa'iidooyinka shirkadooda, maalgashigooda iyo xitaa taariikhada caafimaad ee (si dhow loo ilaaliyo).
Wow… noocyadaas lambarada ah, waa inay jiraan malaayiin dad ah oo ay saamaysay Xatooyo Aqoonsi, sax? Waa hagaag… maya.
Sida laga soo xigtay FTC, waxaa jiray 246,000 oo kiis oo ku saabsan cabashooyinka xatooyada aqoonsiga ayaa la soo wariyay 2006 (HALKAN 255,000 sanadkii 2005). Hagaag taasi waa 1 kii kun ee 1,000 Isticmaalayaasha Internetka, sax?
Marka loo eego FTC, kaliya 1.9% dhammaan cabashooyinka Xatooyo Aqoonsiga waxaa laga sameeyay internetka. 4,674 qof. Marka 98.1% dhammaan cabashooyinka Xatooyo Aqoonsiga lama xiriirin internetka. Aan xoogaa xisaab sameyno do. taasi waa 0.0022% fursad ah in Aqoonsigaaga lagaa xado internetka. Ama 1kiiba 45,000 qof. 3 ilaa 6% ee Xatooyada Aqoonsiga waxay udhaceen jabinta xogta isha, iyadoo aqlabiyadda badan ee ka dhacda hay'adaha maaliyadeed iyo waliba si xatooyo ah looga xado, si elektaroonig ah looma dhaco.
Anigu kama helin hal cabasho dhammaan xogta aan dib u eegay halka xogta dhibbanaha si elektaroonig ah looga jabsaday degel dhinac saddexaad ah. Ma aha hal cabasho.
Weli baqdin? Kaaga qalmay in la dilo ama aad u dhimato dhicitaan ama aad u dhimato shil baabuur ama xitaa dhaawac aad isku geysato ayaa ka weyn fursadahaaga inaad dhibbane u noqoto Khiyaanada Aqoonsiga ee internetka. Xaqiiqdii, fursadaha Dunida ee ay ku dhacdo asteroid qarniga soo socda ayaa ka weyn inaad dhibbane u noqoto Aqoonsiga Khiyaanada ee internetka.
Aniga oo taas maskaxda ku haya, waxaan ku dari lahaa in dhammaan, haddii aysan badnayn, kiisaskaas Khiyaanada Aqoonsiga Internetka ay ka dhasheen qorshe khaa'innimo… halkaas oo isticmaale uu ku soo galay goob been abuur ah oo halkaas la dhigay ujeeddada kaliya ee laga xaday aqoonsigaaga. Kama aysan imaanin goobo sharci ah oo laga xado aqoonsiyada dadka.
Maxaa diidaya? Waxaa jira sababo yar, laakiin furaha ayaa ah in sida ugu fiican ee internetka uu u yahay keydinta xogtaada, sidoo kale waxay ku fiican tahay duubista hal baako kasta oo macluumaad ah oo dhex mara. Weligaa ma dareentay sida ugu dhakhsaha badan ee dadku ula socdaan ka dib markii cunugga qaawan uu soo rogay? Aad ayey ugu fududahay qof inuu wax ka xado waraaqo ka socda hay'adaada maaliyadeed halkii ay waligeedba isku dayi lahayd inaad ka soo qaadato shabakada.
Gabagabadii… jooji walwalka. Ku aaddan shirkadaha amniga iyo kuwa warbaahinta… jooji wax kasta oo cabsi gelinaya! Dabcan kugula talin maayo inaad magacaaga hore u isticmaasho lambar sir ah oo aad uga tagto macluumaadka kaarkaaga deynta macluumaadkaaga, laakiin sidoo kale maahan inaad ka cabsato inaad gasho goob sharci ah oo aad ka hesho xisaabaadka bangigaaga oo la faaruqiyo maalinta xigta. Kaliya sidaas uma dhacayso. Waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo laga walwalo (sida inaad la yeelato xiriir caafimaad oo aamin ah qoyskaaga).
Iyo hadaad dhacdo inaad ahaato dhibbane Khiyaano Aqoonsi kasta, waa kuwan qaar talo.
Habee Sanduuqaaga Raadinta Firefox (oo leh Blog kuu gaar ah!)
Mar 1, 2007 at 9: 18 AM
Farriin weyn. Ma fahmin sababta ay dadku uga caajisaan gelinta macluumaadka aasaasiga ah ee naftooda internetka, gaar ahaan tan inteeda badan waxaa laga heli karaa qaab elektaroonig ah. Inta badan, waxaan heli karaa cinwaanada dadka, lambarrada taleefannada, taariikhaha arooska, maalmaha dhalashada carruurta, iyo mararka qaarkood mushaaraadkooda - dhammaantood anigoon helin kombuyuutar (in kasta oo ay u baahan karto xoogaa lugayn ah). Ku dhajinta sawirka naftaada khadka tooska ah internetka waa wax la mid ah baahinta lambarkaaga SSN.
Waxaan u maleynayaa in jahwareerka uu ku sii socdo sida ganacsiyada ay mudnaanta u siinayaan amniga (ama waxaa laga yaabaa in tirakoobyadu ay sidaas yihiin dartiis). Ganacsiyadu waxay ku bixin doonaan lacagta shahaadada SSL iyo firewall-ka, laakiin macluumaadka ay soo qabtaan waa la daabacaa oo waxaa lagu xareeyaa kabadh aan la furin meel cid waliba ka heli karto. Dabcan, waxaa jira ganacsiyo badan oo xitaa si xun u maareeya xitaa amniga internetka, laakiin waxaan jeclaan lahaa in celceliska ganacsiga yar yar uu leeyahay amni ka xun kan aan idhaahdo, bangiga, marka ay timaado xafiiskooda jir ahaaneed marka loo eego boggooda.
Mar 22, 2007 at 10: 14 AM
Waxay u muuqataa TJX waxay ii cadeyn kartaa qalad… Ma aysan raacin talooyinka shirkadaha kaararka deynta ee ku saabsan sida loo ilaaliyo xogta si nidaamkooda loo jabsaday loona xado xogta kaarka deynta. Wax fikrad ah kamaheynin saameynta tuugadan wali, laakiin waxay noqon kartaa jabsigii ugu weynaa ee xogta kaararka deynta taariikhdeena internetka!
Apr 10, 2007 at 3: 27 PM
Hey Doug, waad ku mahadsan tahay maqaalka macluumaadka. Ma aanan ogeyn sida xaqiiqadu u buun buunisay ilaa ay tirakoobkaagu u wada dhigteen xagga aragtida. Waxaan u maleynayaa inay wali caawineyso in dadku ka taxaddaraan macluumaadkooda iyadoon loo eegin. Waxyaabaha yar yar sida fiirinta cinwaanka websaydhka ayaa kaa caawin kara joojinta phishing (sida email paypal oo kuu sheegaya inaad siiso macluumaadka kaarkaaga deynta, laakiin cinwaanka kor ku yaal ma leh “paypal” meel kasta oo magaca ah). Wax yar oo caqli gal ah iyo taxaddar ayaa ku socda waddo dheer wali.
Qaranka oo dhan VPN